IDenmark nePoland ziya kwi-coronavirus lockdown
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » IDenmark nePoland ziya kwi-coronavirus lockdown
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zasePoland • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Kwiphulo lokufuna ukunqanda ukusasazeka kwe intsholongwane ye-Corona indyikitya yesifo esisulelayo, Pholend kwaye iDenmark namhlanje ibhengeze ukuba bazakuyivala imida yabo kubakhenkethi bamanye amazwe kwaye bonke abo bangengabo abemi baya kuvalwa ukungena kula mazwe.
Eli nyathelo liza ngelixa iDenmark ibhala ityala layo lama-800 lokugula okuyingozi ngoLwesihlanu, kunye nePoland ngama-68. Kwenye indawo eYurophu, iRiphabhlikhi yaseCzech, iSlovakia, neUkraine ziyivalile imida yabo kubantu bamanye amazwe, ngelixa amanye amazwe-akutshanje phakathi kwawo e-Albania-ethintela ukuhamba ukuya nokubuya kwiindawo ezinentsholongwane ezinjenge-Itali neSpain. ISipro yajoyina uluhlu ngolwe-Sihlanu, ikhanyela ukungena kwabangengabo baseYurophu.
IJamani neFrance, nangona kunjalo, banamathele ukuzibophelela kwabo ekugcineni imida yabo ivulekile. Umongameli wase-France u-Emmanuel Macron uthe ngolwesine akazukuyivala imida yase-France, eyibhengeza loo nto "ICoronavirus ayinapasipoti." UMerkel, ngeli xesha, wenqabile ukujoyina iAustria engummelwane ekunqandeni ukungena eJamani ukusuka e-Itali.
Ukufa kwabantu abangama-250 kwabhalwa e-Italiya phakathi koLwesine nangoLwesihlanu, ngelixa iFrance yaxela ezinye iimeko ezingama-79 zosulelo. Ehlabathini lonke, ubhubhane weCovid-19 wosulele abantu abangaphezu kwe-143,000 kwaye wabulala ngaphezulu kwama-5,300, uninzi lwase China.